देशकै महंगो सम्बन्ध वि'च्छेद, श्रीमानले श्रीमतीलाई होइन छोराले आमालाई १२ अर्ब रु'पैयाँ दिने -
Homeसमाचारदेशकै महंगो सम्बन्ध वि’च्छेद, श्रीमानले श्रीमतीलाई होइन छोराले आमालाई १२ अर्ब रु’पैयाँ दिने
April 27, 2021 admin समाचार 589
सम्बन्ध विच्छे’दका थुप्रै घटनाहरू भइरहन्छन् जसमा कहिलेकाहीं एउटा पक्षले धेरै पैसा तिर्छ र कहि’लेकाहीं अर्को पक्षले धेरै पैसा तिर्छ। पछिल्लो समय बे’लायतमा यस्तो सम्बन्ध’विच्छेद भएको छ जहाँ श्रीमान श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेदको विवादमा छोराले आमालाई झण्डै १२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नु’पर्ने भएको छ । यसलाई बेलायतको सबैभन्दा महंगो सम्बन्ध विच्छेद मानिएको छ ।
बीबीसीको रिपोर्टअ’नुसार लण्डनको एउटा अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। यो मुद्दा लण्डनमा बस्ने अजरबैजानका अर्बपति फरहाद उनकी पूर्वपत्नी तात्या’ना र उनीहरूको छोरा तैमुरसित सम्बन्धित छ। न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा आरोपी छोरा’ले आफ्ना पितालाई आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन बेइमानी गरेको ठहर गरेका छन् । खासमा तैमुरले बाबुको सम्प’त्तिको हिस्सा विभाजन नहोस् र आमाले सम्बन्ध विच्छेदको समयमा बढी क्षतिपूर्ति नपाउन् भन्ने चाहन्थे।
रिपो’र्टअनुसार न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा अर्बपति फरहादका छोरा तैमुरले आफ्नो बुबाको सम्पत्ति लुका’एको ठहर गरेका छन् । पैसा लुकाएको अ&भियोग लागेपछि तैमुरले सफाइमा आफूले कलेज पढ्दा व्यापार गरेको र त्यसमा घाटा भएको बताएका थिए । उनले बाबुको पैसा आमाबाट लुकाएर राखेको नभइ व्यवसाय गर्दा गर्दै पैसा गुमाएको तर्क गरेका थिए । अदालतले आफ्नो आदे’शमा तैमुरले आफ्नी आमालाई वैवाहिक सम्प’त्तिको पैसा लिनबाट कसरी रोक्न सक्छन् भनी प्रश्न समेत उठाएको छ ।
न्यायाधी’शले तैमुरकी आमा तात्यानाको पक्ष पनि जान्न चाहेका थिए । उनी लण्डनको विलासी अ’पार्टमेन्ट पनि आफूले पाउँ भन्ने चाहन्थिन् । तथापि, उनी त्यसको बदलामा पैसा लिन पनि राजी थिइन् । अन्ततः न्याया’धीशले आफ्नो फैसलामा तैमुरले अब आफ्नी आमालाई ७५ मिलियन पाउण्ड तिर्न आदेश दिएका छन् ।
रिपोर्टअ’नुसार तैमुरका पिता फरहादको जन्म अजरबैजानमा भएको थियो। सन् २०१२ को नोभेम्ब’रमा फरहदले रुसी ग्याँस उत्पादक संस्थामा आफ्नो शेयर १.४ अर्ब डलरमा बेचेर यति ठूलो धन कमाएका थिए । तर, उनले आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्ध’विच्छेद गरेपछि एक पैसा पनि तिर्न मानेनन् ।
तात्यानाले सम्बन्धविच्छे’दपछि केही पनि नपाएपछि मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, उनले पूर्वपति’विरुद्ध कम्तीमा ६ वटा देशमा मुद्दा दर्ता गरा’एकी थिइन् । त्यसपछि लण्डनको अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। फरहादले अदाल’तको निर्णय गलत र भ्रामक भएको बताएका छन् । डिसीनेपालबाट
May 8, 2021 admin समाचार 328
दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरको शिलामा ‘पसिना’ आएको छ । शनिबार दिउँसो १ बजेतिर शिलामा ‘पसिना’ आएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । मन्दिरमा पसिना आएको भन्दै मन्दिर व्यवस्थापनले स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएपछि सीडीओसहित जिल्ला
April 2, 2021 admin समाचार 1036
January 28, 2021 admin समाचार 2473
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (163601)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158226)